Na teo aza ny fanoheran’ny fokonolona… : nosokafan’ny sinoa ny toeram-pitrandrahana tany Soamahamanina | NewsMada
Na teo aza ny fanoheran’ny fokonolona… : nosokafan’ny sinoa ny toeram-pitrandrahana tany Soamahamanina
Par Taratra sur 22/06/2016
Na eo aza ny fanoheran’ny mponina any Soamahamanina ny fitrandrahana hataon’ny Sinoa any an-toerana, tsy nahasakana ireto farany tsy nanao ny lanonana fanokafana amin’ny fomba ofisialy ity toeram-pitrandrahana ity izany, omaly.
Niroso ny Sinoa, na teo aza ny resaka fitakiana nataon’ny mponina ny handroahana azy ireo, hiala any Soamahamanina. Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy omaly tany an-toerana ny toeram-pitrandrahana. Natrehan’ny manampahefana any Soamahamanina, toy ny ben’ny tanàna ny lanonana, ary natrehan’ny tale jeneralin’ny orinasa izay tonga avy any Sina, raha araka ny fanazavana voaray.
Nanome fanazavana ny ben’ny Tanàna Rabesahala Zo Théophile fa ara-dalàna avokoa ny taratasy ampiasain’ilay orinasa Jiuxing mines Sarl, hanao fitrandrahana volamena amin’ny toerana antsoina hoe Andravolobe, ao amin’ny kaominina Soamahamanina, Miarinarivo. Voalazany fa tamin’ny herinandro lasa teo no nahazo ny fahazoan-dalana manambara fitsirihana ny tontolo iainana na ny “permis environnemental” avy amin’ny ONE.
Tany mirefy eo amin’ny 64 carrées no hotrandrahin’ireo Sinoa, izany hoe, tokony ho 25 000 000 m2. Araka ny fanazavana azo, ireo olona izay voakasika amin’izany ny taniny, efa nisy ny fanofana tany 700 000Ar isam-bolana miampy ny vola aloha izay nanatanterahana ny fifanarahana. Fifanarahana izay maharitra 40 taona, araka ny fanazavana izay nomen’ny tale tekenika ao amin’ity orinasa ity, Rasolomanana Dani. Efa any an-toerana ny kamiaobe miisa 17, ireo fitaovana raitra fandavahana tany, sns. Miomana ny hanangana trano sy handavaka ireo sinoa.
Andanin’izany, tazana teny amin’ny manodidina ireo mponina tsy mankasitraka ny fitrandrahana ataon’ireto Sinoa ireto. Nilamina omaly, raha ny tany an-toerana aloha. Milaza tsy hanaiky rahateo ireo mponina manohitra izao fahazoan’ny teratany vahiny tany izao. Manoman-javatra ireo olona ireo.